JỌN 15 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (JỌN 15)
“Mụ onwe m bụ ezi osisi vaịnị ahụ. Nna m bụkwa onye nlekọta ọrụ ubi.
Ọ na-egbuda alaka ọ bụla dị nꞌime m nke na-adịghị amị mkpụrụ. Ma alaka ọ bụla na-amị mkpụrụ ka ọ na-ewewpụ ihe nile naeme ka ọ hapụ ịmi mkpụrụ nke ọma, ka o nwee ike mịa mkpụrụ dị ọtụtụ.
Ọ bụrụ na unu anọgide nꞌime m, mụ onwe m kwa ga-anọgide nꞌime unu. Alaka ọ bụla apụghị ịmị mkpụrụ nꞌọnwe ya ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị nꞌosisi vaịnị ahụ. Otu a, unu apụkwaghị ịmị mkpụrụ ma ọ bụrụ na mụ onwe m anọghị nꞌime unu.
Ma ọ bụrụ na unu na-anọgide nꞌime m, ọ bụrụkwa na okwu m na-anọgide nꞌime unu, rịọnụ ihe ọ bụla unu chọrọ nꞌaha m, a ga-emekwara unu ya.
Ọ bụrụ na unu amịa mkpụrụ, a ga-esite na mkpụrụ ahụ nye Nna m otuto. Nꞌụzọ dị otu a ka unu ga-eji bụrụ ndị na-eso ụzọ m.
Agwala m unu ihe ndị a ka ọṅụ m zuo oke nꞌime unu, ka ọṅụ unu zuokwa oke.
Nke a bụkwa iwu m na-enye unu: hụrịtaanụ onwe unu nꞌanya dị ka m siri hụ unu nꞌanya.
Unu onwe unu bụkwa ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu edebe ihe nile m nyere unu nꞌiwu.
Malite ugbu a, agaghị m akpọkwa unu ndị ohu ọzọ. Nꞌihi na ohu adịghị amazu ihe nile onyenwe ya na-achọ ime. Ma ana m akpọ unu ndị enyi m nꞌihi na ihe nile Nna m naezube ka m gwara unu.
“Ọ bụkwaghị unu onwe unu họpụtara m. Ọ bụ m họpụtara unu ka unu baa nꞌime ụwa mịa mkpụrụ, mkpụrụ nke ga-adịgide. Ya mere, ọ bụrụ na unu arịọọ Nna m ihe ọ bụla site nꞌaha m, Nna m ga-enye unu ihe nile unu rịọrọ.
Ma nke a bụ iwu m nyere unu. Hụnụ onwe unu nꞌanya.
Unu echegbula onwe unu ma ọ bụrụ na ụwa akpọọ unu asị. Chetanụ na ụwa buru ụzọ kpọọ m asị tupuu ọ kpọọ unu asị.
A sịkwarị na unu bụ nke ụwa, ụwa ga-ahụ unu nꞌanya. Ma ugbu a unu abụghị nke ụwa. Nꞌihi na mụ onwe m si nꞌime ụwa kpọpụta unu. Ọ bụkwa nꞌihi ya ka ụwa ji akpọ unu asị.
Unu chetakwa ihe m gwara unu malite na mbụ, na ohu adịghị ukwuu karịa onyenwe ya. Nꞌihi nke a ebe ụwa kpagburu m, ha ga-akpagbukwa unu. Ha agaghị erube isi nꞌokwu unu, nꞌihi na ha erubeghị isi nꞌihe m ziri ha.
Ee, ha ga-eme unu ihe nile ndị a nꞌihi na unu bụ ndị nke m, na nꞌihi na ha amaghị Onye ahụ zitere m.
“Ọ bụrụ na abịaghị m nꞌụwa, ikpe agaraghị ama ha. Ma ugbu a abịala m gwa ha okwu ndị a nile. Ya mere, ha enweghị agụgọ ọ bụla.
Onye ọ bụla kpọrọ m asị kpọkwara Nna m asị.
A sị na ọrụ nile m rụrụ nꞌetiti ha akarịghị ọrụ nke onye ọ bụla ọzọ rụrụ, ha agaraghị abụ ndị ikpe mmehie mara. Ma ugbu ha ahụzuola ọrụ ịrịba ama ndị a nile, ma ha nọgidekwara naakpọ mụ na Nna m asị.
Ma mmeso ndị a nile emeela ka ihe e dere nꞌakwụkwọ nsọ mezuo. Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, ‘Ha akpọọla m asị, ma emeghị m ha ihe ọjọọ ọ bụla.’
Ma unu onwe unu aghaghị ịgwakwa mmadụ nile ihe banyere m, nꞌihi na mụ na unu anọọla site na mmalite.